About Gems & Jewelry Catalogue | Hello Madam Catalogue | Diamond , Emeral, Emerland, 925 Silver, Amethic , Amethyt, Blue Topaz , Citrine, Color Stone, Garnet, Glasses, Gold, Jade, Moonstone & Coral , Pearl , Peridot, Rose Quartz, Ruby, Sapphire, Spinel, Wedding Ring
Sign in | New customer? Start here!
Gems & Jewelry Catalog
About Gems & Jewelry Catalogue
Gems & Jewelry Catalogue
HELLO MADAM Gems & Jewelery Catalogue Vol.(1) No.(1) ကို 21.10.2010 တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး Gems & Jewelery Catalogue စာအုပ် အဖြစ် စတင်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီ ခဲ့ပါသည်။
HELLO MADAM Gems & Jewelery Catalogue Vol.(1) No.(2),
HELLO MADAM Gems & Jewelery Catalogue Vol.(1) No.(3),
HELLO MADAM Gems & Jewelery Catalogue Vol.(1) No.(4)
HELLO MADAM Gems & Jewelery Catalogue Vol.(1) No.(5)
HELLO MADAM Gems & Jewelery Catalogue Vol.(1) No.(6)
HELLO MADAM Gems & Jewelery Catalogue Vol.(1) No.(7) နှင့်
HELLO MADAM Gems & Jewelery Catalogue Vol.(1) No.(8) တို့ကို ဆက်လက်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီ ခဲ့ပါသည်။
Editor DesireHello Madam Gems & Jewelry Fashion Catalogue ကို ထုတ်ဝေခဲ့ သည်မှာ Vol(8) သို့ပင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ စတင်ထွက်ရှိ သည်မှ ယနေ့တိုင် စောင့်မျှော်အားပေးကြသော ကရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိသည့်အပြင် မင်္ဂလာနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။
မိမိတို့အဖွဲ့သားများမှ တစ်အုပ်ထက်တစ်အုပ် ပို၍ပို၍ ကောင်းမွန်စုံလင် စေရန် တက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်းကြိုးစား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုသို့ကြိုးစားတင် ဆက်ရာတွင် မြန်မာ့ကျောက်မျက်များ၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ကျော်ကြားမှု၊ လက်ရာဒီဇိုင်းများ၏ ဆန်းသစ်လှပမှု၊ အယူအဆ ကောင်းမွန်၍မှန်ကန်သော အရောင်အသွေး ရရှိစေမည့် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသူ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ဒီဇိုင်နာ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းမွန်မှု၊ အဆင့်အတန်း မီပုံနှိပ်ဖော်ပြမှု၊ သရုပ်ဆောင်များ၏ လှပမှု၊ မိတ်ကပ်ပညာရှင်များ၏ သေသပ်သောခြယ်မှုန်းမှု စသည့် ပညာရှင်များ၏ ဟန်ချက်ညီညီ ကြိုးစားမှုများအပေါ် Hello Madam မှစေတနာများထပ်ပေါင်း၍ စီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ရပါသည်။
Copyright © 2010 - 2020 Hello Madam Fashion Catalog. Developed by Global New Wave Technology